MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 2
ရာမိုးဇင် ● ဝှက်ဖဲ
ရာမိုးဇင် ● ဝှက်ဖဲ (မိုးမခ) ဇွန် ၁၉၊ ၂၀၁၈ ဖတ်ပါ မှတ်ပါ လေ့လာပါ အရိုးများသလေး ချေးခါးသလေးနဲ့ မြစ်ချောင်းတွေလည်း တိမ်ကောခဲ့ရပြီးပြီ။ မြစ်တွေရဲ့မာယာမှာ လှေကြုံစီး အပုတ်ချရင်း တရားပဲရနေသလို တရားပဲကျနေသလိုလို တရားစကား လှိမ့်ပြန်ပြောရင်း အကျွန်တို့ဟာ ဘုရားတတတ်တယ်။ ဘုရားရှင်ကို စစ်သုံးအမြှောက်ဆံခွံတွေနဲ့ ဘုရားပန်းအိုးထိုး လှူဒါန်းတတ်တယ်။ ဘုရား တရားမှန်းသိတယ်။ အရေးအကြောင်းဆို ဘုရား ဘုရား တတတ်ခဲ့ပါတယ်။ လမ်းရှိသလောက်လျှောက်ခဲ့ကြပြီး ခရီးမပေါက်တဲ့ အခါ ကိုယ့်ခြေထောက်ပဲကိုယ် အပြစ်တင်ရမလား ဇဝေဇဝါ ဒုက္ခတရားရဲ့ဘာသာစကားမှာ ဒီနိုင်ငံ လူလာဖြစ်ရတာ ဝှက်ဖဲများတဲ့ ကစားဝိုင်းလို။ ။ ရာမိုးဇင် Tags: ရာမိုးဇင် Related posts ရာမိုးဇင် ● လေချွန်ပြီး အေးအေးလူလူတင်ဆက်နေတဲ့...
ကာတွန်း ATH ရဲ့ ခေတ်သစ် မြန်မာ့သင်္ကေတ …
ကာတွန်း ATH ရဲ့ ခေတ်သစ် မြန်မာ့သင်္ကေတ … (မိုးမခ) ဇွန် ၁၉၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
ဇင်လင်း ● လွမ်းဆွတ်တသဖွယ်ရာ တခုသော ရွှေရတုသဘင်အခါ … (မိုးမခ) ဇွန် ၁၉၊ ၂ဝ၁၈ ၁၉၉၅ ခုနှစ်သည် လွမ်းစရာကောင်းသောနှစ်ဖြစ်သည်။ လွမ်းစရာကောင်းသောနှစ်ဟုဆိုရသော်လည်း ၁၉၉၅ တွင် မိမိ သည် နာမည်ကျော် အင်းစိန်ဗဟိုစံပြ အကျဉ်းထောင်၌ နိုင်ငံရေးပုဒ်မ ၅ (ည) ဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ်ကျခံနေရချိန် ဖြစ် သည်။ မိမိသည် ထိုစဉ်က အင်းစိန်ထောင်တွင် နာမည်ဆိုးဖြင့်ထင်ရှားသော နိုင်ငံရေးတိုက်ဝန်းအတွင်းရှိ ၃ တိုက် အခန်း ၁ဝ ၌ အကျဉ်းကျခံနေရသည်။ ထိုစဉ်က မိမိနှင့် ဘဝတူ အခန်းဖော် ၂ ဦးမှာ ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် (ယခု မန္တလေးတိုင်း ဝန်ကြီးချုပ်) နှင့် ဒေါက်တာမြင့်နိုင် (ယခု...
ကိုသစ် (သီတဂူ) ● မုန်တိုင်းထဲက ဖယောင်းတိုင် – အပိုင်း (၁၃)
ကိုသစ် (သီတဂူ) ● မုန်တိုင်းထဲက ဖယောင်းတိုင် – အပိုင်း (၁၃) (မိုးမခ) ဇွန် ၁၉၊ ၂ဝ၁၈ ငဘိုတစ်ယောက်ကြောင့် တိဗက်တို့ ငါးပါးမှောက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ငဘိုဟူသော အသံကိုကြားလျှင် အခုချိန်ထိ တိဗက်တို့ က ထုချင်ထောင်းချင်စိတ်တွေ ရှိနေကြသေးသည်။ တိဗက်အရေးကို ဦးဆောင်ဖြေရှင်းမည့်သူမရှိ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ယခု ဘုန်းတော်ကြီးဒလိုင်းလားက အသက်တစ်ဆယ့်ငါးနှစ်အရွယ်သာရှိသေးသည်။ တိဗက်ပြည်တွင်းရေးတွေ အကြီးအကျယ် ရှုပ်ထွေးနေချိန်တွင် နိုင်ငံတော်၏ အမြင့်ဆုံးအာဏာကို ဒလိုင်းလားမားဘုန်းတော်ကလေးကလွဲ၍ မည်သူ့ကိုမျှ မအပ်နှင်း လိုကြ။ တိဗက်ပြည်သူများက ဘုန်းတော်လေးဒလိုင်းလားမားကို နိုင်ငံတော်၏ အမြင့်ဆုံးတာဝန်ကိုယူပြီး တိဗက်အရေးကို ဦးဆောင်ဖြေရှင်းပေးစေချင်ကြသည်။ အစပိုင်းတုန်းကတော့ ဘုန်းကြီးလေးက ငြင်းပါသေးသည်။ သူ့မှာ တိဗက်ကို ဦး ဆောင် နိုင်လောက်သည့် အတွေ့အကြုံမရှိ။ ပြီးတော့ အသက်ငယ်လွန်းနေတာကြောင့်လည်း...
အောင်ဝေး – ချ စ် လို့ရေးတဲ့ က ဗျာ( ၁ ၀ )
Than Htay Maung’s art အောင်ဝေး – ချ စ် လို့ရေးတဲ့ က ဗျာ( ၁ ၀ ) (မိုးမခ) ဇွန် ၁၉ ၊ ၂၀၁၈ အကယ်၍ ဇွန်လ(၁၉)ရက်နေ့တွင် … ။ ငါ့ သခင် ငါ့ ရင်ဝ မှာ လှိုင်းမ တစ်ငြိမ်။ အိမ်မိုးခေါင် မှာ လရောင် တစ်ထိုး။ ရိုးခြေနက် မှာ ရွက်သစ် တစ်ဝေ။ မြစ်ရေကြော မှာ ပန်းလှေ တစ်မျှော။ လောကကမ်း မှာ လွမ်းကြိုး တစ်နှောင်။ တောင်တံတိုင်း မှာ...
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မွေးနေ့အမှတ်တရ ပန်းချီပြပွဲ
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မွေးနေ့အမှတ်တရ ပန်းချီပြပွဲ K (မိုးမခ) ဇွန် ၁၉ ၊ ၂၀၁၉ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ (၇၃)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရအဖြစ် “Happy 73rd Birthday, The Lady ” လို့ အမည် ပေးထားတဲ့ ပန်းချီပြပွဲကို ရန်ကုန်မြို့တာမွေမြို့နယ်မေတ္တာညွှန့်ရပ်ကွက် လယ်ယာရွှေမြေလမ်းနှင့် သမာဓိလမ်းထောင့်၊ အမှတ် (၈၃၃)ရှိ Sagawar Art Space မှာ ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့မှ ဇွန်လ ၃၀ရက်နေ့အထိ ပြသသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ယခုပြပွဲမှာ စင်္ကာပူရောက် မြန်မာပန်းချီဆရာတဦးဖြစ်တဲ့ Artist Htee Saing ရေဆေးဖြင့်ရေးဆွဲထားသော ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်ပုံတူ ပန်းချီကား၂၃ကား၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဖြင်ြ့ပုလုပ်ထားသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံတူပန်းချီ ကား၁၀ကားကို ချိတ်ဆွဲပြသ ရောင်းချသွားမှာမယ်လို့သိရပြီး...
ကာတွန်းငွေကြည်၊ မြန်မာမြူးဇစ်ပွဲ နဲ့ စာရေးဆရာညီတင့် အစီအစဉ်များ
ကာတွန်းငွေကြည်၊ မြန်မာမြူးဇစ်ပွဲ နဲ့ စာရေးဆရာညီတင့် အစီအစဉ်များ K (မိုးမခ) ဇွန် ၁၉ ၊ ၂၀၁၈ မြန်မာနိုင်ငံကာတွန်းဆရာများအသင်းမှစီစဉ်သော ကာတွန်းပညာမျှဝေခြင်းအစီအစဉ်မှာ ကာတွန်းဦးငွေကြည် ဟောပြော မြန်မာနိုင်ငံကာတွန်းဆရာများအသင်းမှစီစဉ်သော ကာတွန်းပညာမျှဝေခြင်း အစီအစဉ်ကို ရန်ကုန်မြို့ အမှတ်(၁၇၃/၁၇၅) ပန်းဆိုးတန်းတာဝါ-အခန်းအမှတ် (၆၀၁)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း(အလယ်)မှာရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကာတွန်းဆရာများအသင်း ရုံး ခန်းမှာ (စနေနေ့) ဇွန်လ ၁၆ရက် နေ့လယ် ၁ နာရီ မှ ၃နာရီထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ကာတွန်းပညာမျှဝေခြင်း အစီအစဉ်မှာ ကာတွန်းဆရာ ဦးငွေကြည်မှ ဟောပြော ပြီး ခေါင်းစဉ်ကတော့ စာနယ်ဇင်းကာတွန်းသမားဘဝ/ အတွေ့အကြုံများဖြစ်ပါတယ်။ ကာတွန်းဦးငွေကြည်ဟာ မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်၊ စာနယ်ဇင်းလောကတွင် ငွေကြည်၊ မောင်လင်း ကလောင်များဖြင့်...
မောင်စွမ်းရည် ● ဂန္ထဝင်နဲ့ ခေတ်ပေါ် (မိုးမခ) ဇွန် ၁၇၊ ၂၀၁၈ ယနေ့ မြန်မာစာပေလောကမှာ အမျိုးသားစာပေဆု(ကဗျာ) ရွေးချယ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ၀ိဝါဒ/ ဒွိဝါဒ အငြင်းအခုံလေး တွေဖြစ်နေတာကို ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာ ဘာကာစာလွှာပြုနေကြတာကို ဖတ်နေရပါတယ်။ ဆရာကြည်မင်း၊ ကာတွန်းဝင်း အောင်၊ စံငြိမ်းဦး စသဖြင့် ပါဝင်ဆွေးနွေးနေကြတာတွေလည်း တွေ့ရပါ တယ်။ ဟိုလို ဖတ်ရ၊ ဒီလို ဖတ်ရနဲ့ စိတ်ရှုပ် သလို ဖြစ်သွားရပေမယ့် သြော် ဒါဟာ ဒီမိုကရေစီပါလား လို့ စိတ်ဖြေလိုက်ရတော့လဲ ပျော်တောင်လာပါသေး တယ်။ မြန်မာစကား ရှိတယ်မဟုတ်လား။ အငြင်းသန် အမှန် ဆိုတဲ့။ အယူအဆ နှစ်မျိုးကွဲကြတာက အမျိုးသာစာပေ(ကဗျာ)ဆု ရွေးချယ်ရာမှာ နှစ်မျိုး ခွဲပြီးရွေးမလား၊ ပေးမလားဆိုတဲ့...
သင်းရည်လွင် ● မိုးတစက် လေတစက် လူတွေ (မိုးမခ) ဇွန် ၁၇၊ ၂၀၁၈ ကျည်ကွယ် မျက်ကွယ် တိုးဝင်သွားချင်သော စိတ်များကို ဆိုလိုသည်။ မာန်မာန် ထန်ထန် ရိုက်ပုတ်လာသော လှိုင်းများအား ဦးခေါင်းကွဲအောင် အဲဒီလေတွေက တိုက်ပစ်လိုက်တယ်။ မိုးမိနေတဲ့ မြင်ကွင်းမှာ ကပ်သုံးပါးအကြောင်း တွေးမိတော့ ကျွန်တော့် ရေဆိုးမြောင်းကလေးက ဘာမှမစီးဆင်းချင်တော့တာ သေချာခဲ့ပုံပေါ်တယ် သူ့ ခြေထောက်တွေမှာ အရသာသိတဲ့ အနံ့မရတော့ဘူး။ လူပညာရှိတွေရဲ့စကားဥပမာကို ဝင်္ကပါလို ပစ်ချခဲ့တော့ အယုံလွယ်သူဟာ ကောင်းကင်ပေါ်က တစုံတရာ ပြုတ်ကျလာမှာလို့ တွေးနေတယ်။ ခုထိ မိုးတစက် လေတစက်ကိုပဲ ဘုရားသခင်လက်ဆောင်လို့ စိုစို ရွှဲရွှဲ ခံယူဆဲ ဖြစ်တယ်။ ငါတို့ကံတရားများ အခွေလိုက် အခွေလိုက် ဘယ်အစတခုက ငြိမ်းချမ်းရေးလဲ...
ထက်ခေါင်လင်း (Myanmar Now) ● မုဒိမ်းမှုဖြင့် ရဲအလိုရှိနေသူ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်လာခြင်း (မိုးမခ) ဇွန် ၁၇၊ ၂၀၁၈ အမေ့အိမ်ကို ပြန်ရောက်နေတဲ့ မလဲလဲ့ အိမ်ရှေ့လမ်းမဘက်ကို ကြည့်နေတုန်း ဆိုင်ကယ် မောင်းသွားတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို လှမ်းမြင်လိုက်ရတဲ့ခဏမှာ ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ အဲဒီလူဟာ သူ ၁၄ နှစ်သမီး အရွယ်မှာ သူ့ကို အတင်းကားတင်ပြေး၊ မုဒိမ်းကျင့်အပြီး ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်နေသူ ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ပိုပြီး ထိတ်လန့်စရာကောင်းတာက အဲဒီ တရားခံပြေးဟာ သူအလည်ရောက်နေတဲ့ ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း) မြို့နယ် ၁၄ဝ ရပ်ကွက်ရဲ့ တန်ခိုးထက်လှတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ရဲက တရားခံပြေး ကြေညာခံထားရသူဟာ ဘယ်လို လုပ်ပြီး ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖြစ်နေရတာလဲဆိုတာကို မလဲ့လဲ့...
ညိမ်းအေးသာ ● ကော်ဖီသောက်ခြင်း အနုပညာ (မိုးမခ) ဇွန် ၁၇၊ ၂၀၁၈ တကယ်တော့ ကော်ဖီသောက်ခြင်း အနုပညာဆိုသော စကားလုံးသည် သူ့ကိုယ်ပိုင်စကားလုံး မဟုတ်ရပါ၊ ကော်ဖီသောက် ခြင်း အနုပညာဆိုသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် သူ့အားပေးသောကဗျာတပုဒ်ကို လက်ခံရရှိဖူးပါသည်။ “ကော်ဖီမတ်ခွက် နှစ်လုံး .. တလုံးမှာ me .. တလုံးမှာက too .. ကိုယ့်အသည်း လေနုအေးလေးဖြတ်သွား ..” ဆိုသော ကဗျာအတိုလေးကို သူ့အားပေးခဲ့သော ကဗျာဆရာမှ တခါက မင်းကိုသိပ်သတိရတယ်ဟုစာပို့ရာ သူကလည်း အလွယ်တကူ me too ဟု ပြန်ဖြေမိပါသည်။ ထို me နှင့် ထို too က ကော်ဖီမတ်ခွက် နှစ်လုံးပေါ် ဘယ်လိုရောက်သွားသည်မသိ၊ လေနု...
လင်းသစ္စာဦး ● ဗုံးခိုကျင်းထဲက ငြိမ်းချမ်းရေး (မိုးမခ) ဇွန် ၁၇၊ ၂၀၁၈ ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံမှာ အသက်ကအစ ဆင်းရဲတော့ ဘာကို နှမျောနေရဦးမှာလဲ … စားစရာမရှိတော့ လာခဲ့ ကျည်ဆံတွေ အတွဲလိုက် အတွဲလိုက် ဗိုက်ဝအောင်စားပစ်လိုက်တယ် … ဗုံးခိုကျင်းတွေ မလိုပါဘူး ငါတို့အသက်ဓာတ်ဟာ ဗုံးခိုကျင်းထက် နက်တယ် … ငါတို့အသက်ကိုမှ ငါတို့ မြဲမြဲ မကိုင်ချင်ကြတော့တာ ရှင်သန်ခြင်းဟာ ခဲရာခဲဆစ် လေးလံနေမှတော့ ဆန်ကာပေါက်ဖြစ်တာ ဘာအရေးလဲ အသက်ကို ဒိုင်းလိုကာပြီး တက်ခဲ့တယ် … တခုပဲ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့အသံလေး ရောက်ရာအရပ်က ကြားချင်သေးတယ် … လင်းသစ္စာဦး Tags: လင်းသစ္စာဦး Related posts No related posts.
ဇင်လင်း ● မူးယစ်ရာဇာ လက်ရင်းတရားခံကြီးတွေ ဘာကြောင့် လွတ်မြောက်နေတာလဲ (မိုးမခ) ဇွန် ၁၆၊ ၂၀၁၈ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး ပြဿနာဟာ တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေကို ဘေးဒုက္ခ အန္တရာယ် အမျိုးမျိုးးပေးရုံမက ဒေသ တွင်းရှိ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုပါ ဒုက္ခပေးနေတဲ့အနေအထား ရောက်နေပြီ။ မေလ ၃ဝ ရက်နေ့က နေပြည်တော်မှာ ပြု လုပ် တဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများ အန္တရာယ်တားဆီး ကာကွယ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ အထူးအစည်း အဝေးမှာ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်သယ်ဆောင်မှုတွေဟာ ပြည်တွင်းရော ပြည်ပမှာပါ မြင့်တက်လာကြောင်း ပြည် ထဲရေးဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ဆွေကိုယ်တိုင် ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် မေလ၂၂ ရက်နေ့ က မလေးရှား နိုင်ငံ စီမရစ်မြို့ ကုန်လှောင်ရုံမှာ...
မောင်စွမ်းရည် ● ရုရှားပညာရှင် ယီဂေါမိုဇွင်ရေးတဲ့ အောင်ဆန်း (မြန်မာပညာရှင် ဦးဝင်းခင် ဘာသာပြန်) (မိုးမခ) ဇွန် ၁၆၊ ၂၀၁၈ ဗမာပြည်မှာ အောင်ဆန်းအတ္တုပ္ပတ္တိ စာအုပ်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ပြည်သူချစ်တဲ့၊ ကမ္ဘာချစ်တဲ့လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်အဖြစ်နဲ့ အောင်ဆန်းအကြောင်းကို ရေးလို့မဆုံး၊ ဖတ်လို့ မဝနိုင်ကြပါ။ ပြည်သူလူထုအများစုက တော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို့ပဲ ဒီနေ့အထိခေါ်တွင်နေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်ဆန်းကို မြန်မာတနိုင်ငံလုံးနဲ့ တကမ္ဘာ လုံး သိရှိကျော်ကြားသွားစေခဲ့တာက အရှေ့တောင် အာရှ ဗြိတိသျှအင်ပါယာအတွင်းမှာ နိုင်ငံငယ်လေးတခုက နယ်ချဲ့ဗြိတိသျှ ကိုရော၊ နောက်ထပ်ကျူးကျော်အပိုင်စီးလာသူ ဖက်ဆစ်ဂျပန်ကိုရော ပြောင်မြောက်စွာမောင်း ထုတ်တော်လှန်ခဲ့တဲ့ ဗမာ့မျိုး ချစ်တပ်မတော် ဗိုလ်ချုပ်အဖြစ်နဲ့မို့ပါ။ ဗမာ့တပ်မတော်သားတွေက သူတို့ခေါင်းဆောင်ကို ဗိုလ်ချုပ်လို့ခေါ်တွင်ခဲ့ရာက ဗမာ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးကပါ ဗိုလ်ချုပ်လို့ လေးစားချစ်ခင်စွာ ခေါ်တွင်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။...
ကာတွန်း ATH ရဲ့ မဖြေရှင်းတတ်တော့ပါ …
ကာတွန်း ATH ရဲ့ မဖြေရှင်းတတ်တော့ပါ … (မိုးမခ) ဇွန် ၁၆၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
ဦးဖိုးထင်(ခ) ကဗျာဆရာ မောင်ကျော်ထင် ကွယ်လွန်ခြင်း ၁၉ နှစ်ပြည့် ဇွန် ၁၆ရက်မှာ ပြုလုပ်မယ်
၁၉၆၁-၆၂ ရန်ကုန်ခရိုင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဥက္ကဌဟောင်း ဦးဖိုးထင်(ခ) ကဗျာဆရာ မောင်ကျော်ထင် ကွယ်လွန်ခြင်း ၁၉ နှစ်ပြည့် ဇွန် ၁၆ရက်မှာ ပြုလုပ်မယ် K (မိုးမခ) ဇွန် ၁၅၊ ၂၀၁၈ ၁၉၆၁-၆၂ ရန်ကုန်ခရိုင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဥက္ကဌ ဦးဖိုးထင်(ခ) ရဲဘော်ကျော်ခန့်(ကဗျာဆရာ မောင်ကျော်ထင်) ကွယ် လွန်ခြင်း ၁၉ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို ကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်များနဲ့စာပေလောကသားများကနေ ကြီးမှူးပြီး ရန်ကုန်မြို့ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ မင်းကြီးလမ်း၊ အမှတ် (၂၇၅)ရှိ နေအိမ်မှာ ဇွန်လ ၁၆ရက် နံနက် ၁၁နာရီမှ နေ့လယ် ၁နာရီ ထိ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကဗျာဆရာ မောင်ကျော်ထင်(ခ)ဦးဖိုးထင်ဟာ ၁၉၆၁-၆၂ ရန်ကုန်ခရိုင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဥက္ကဌအဖြစ်လည်းကောင်း ကဗျာဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာ၊ နေသွေးနီ၊ မောင်လေးအောင်၊...
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – can’t see the forest for the trees
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – can’t see the forest for the trees (Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ ဇွန် ၁၅၊ ၂၀၁၈ Tags: Academic Weekly Journal, ရွှေမိ Related posts ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – Keep your head above water (0)
ကမ္ဘာ့တော်လှန်ရေးအမှတ်တံဆိပ် (သို့) CHE K ငြိမ်းချမ်း (မိုးမခ) ဇွန် ၁၅၊ ၂၀၁၈ စာရေးသူ – Richard L. Harris ဘာသာပြန် -နိုင်မြင့်သစ် စာအုပ်အမည် – ချေဂွေဗားရား (အထင်ကရ တော်လှန်ရေးသမားတဦး၏ နိုင်ငံရေးရာဇဝင်) (Che Guevara: A Biography) အမျိုးအစား – နိုင်ငံရေး ထုတ်ဝေသည့်တိုက် – ယဉ်မျိုး ထုတ်ဝေသည့်ကာလ – ၂၀၁၇၊ သြဂုတ်လ တန်ဖိုး- ၄၀၀၀ ကျပ် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီး ယနေ့ထိ လေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ CHEဆိုတဲ့တော်လှန်ရေးသမားကြီးကို ၁၉၂၈ ဇွန် ၁၄ရက်နေ့မှာမွေး ဖွားခဲ့တာဆိုတော့ ယနေ့ဆိုရင် CHE ဟာ အသက် ၉၀ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တရားအတွက်၊ လွတ်လပ်ရေးအတွက်...
မိုးချိုသင်း ● တာဝန်ကျေတဲ့ ဘဝနေနည်း (မိုးမခ) ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၈ ဟိုတနေ့က ကိုကျော်ဝဏ္ဏက ကျောင်းတုန်းက လှုပ်ရှားမှုတွေ မမေ့ရအောင် ချရေးနေလို့ ကိုယ်လဲ ဘာမှ မယ်မယ်ရရ မလုပ်ခဲ့ပေမယ့် သဲပိစိအနေနဲ့ သတိရတာလေးတွေ ရေးချင်စိတ်ပေါက်လာလို့ ရေးလိုက်အုံးမယ်။ ကိုယ်က တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းက တက္ကသိုလ် ဆရာ ဆရာမများနေတဲ့ ပုဂံခြံဝင်းမှာမွေးခဲ့သူမို့ အရေးအခင်းတွေနဲ့ မစိမ်းခဲ့ ဘူး။ ငယ်ငယ်ကလေးဘဝက ဦးသန့် အရေးအခင်းမှာ အဖေက ဟောပြောပွဲနားထောင်ဖို့ သွားရင်း ကိုယ့်ကို ခေါ်သွားဖူးတယ်။ တက္ကသိုလ်ဆေးရုံရှေ့သစ်ပင်အောက်ကနေ ဟောပြောပွဲကို အဖေ့ပုခုံးပေါ်ကနေ နားထောင်ခဲ့ရတာ၊ ဟောပြောပွဲ အပြန် လမ်းမှာ အချီခံရတဲ့ကိုယ်က ပင်ပန်းနေပြီ။ အဖေ တလှည့် အမေတလှည့် ချီပြီး လမ်းလျှောက် ပြန်ရတာ။...
ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ရဲ့ ပထမဦးဆုံး အာဖရိကန် အမေရိကန်အမျိုးသမီးမြို့တော်ဝန် မဲနှာတဖျားနဲ့ နိုင် မောင်လူပေ၊ မိုးမခ၊ ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၁၈ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ရဲ့ ပထမဦးဆုံး အာဖရိကန် အမေရိကန်အမျိုးသမီးမြို့တော်ဝန် လန်ဒန်ဘရိ( London Breed) ပါ။ မဲရေတွက်မှုအပြီးမှာ သူမက ပြိုင်ဖက်ဖြစ်တဲ့ မတ်ခ်လီနိုကို အနိုင်ရသွားပါတယ်။ သူမဟာ ငယ်စဉ်က ဆန်ဖရန်စစ္စကို မြို့တော်ခန်းမနဲ့ မနီးမဝေးက ဝင်ငွေနည်းသူတွေကိုပေးတဲ့အစိုးရအိမ်ရာစီမံကိန်း ( Government low income housing project) မှာ အဖွားဖြစ်သူနဲ့အတူနေရင်းကြီးပြင်းခဲ့ရသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ညီမဖြစ်သူက မူးယစ်ဆေးအသုံးလွန်ပြီးဆုံးခဲ့ရသလို၊ မောင်ဖြစ်သူကလည်း ပြစ်မှုတစ်ခုကြောင့်အကျဉ်းထောင်ထဲမှာပါ။ သူမကတော့ အဖွားဖြစ်သူရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီး ပညာကိုပဲ ကြိုးစားခဲ့သူမို့ ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်၊ ဒေးဗစ် ( UC Davis) ကနေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံနဲ့ဘွဲ့ရခဲ့တယ်။...
ကာတွန်း KZZH ရဲ့ ဖမ်းနိုင်ရင် ဖမ်းလေ …
ကာတွန်း KZZH ရဲ့ ဖမ်းနိုင်ရင် ဖမ်းလေ … (မိုးမခ) ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း - KZZH Related posts ကာတွန်း KZZH- အသံက မတိတ်နိုင်သေး (0) ကာတွန်း kzzh ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းသူတွေ … (0) ကာတွန်း kzzh ရဲ့ ပြောထားပြီးသားနော် … (0) ကာတွန်း kzzh ရဲ့ မေကြီးကယ်ပါ (0) ကာတွန်း kzzh ရဲ့ ပျောက်သောသူ (0)
လင်းသက်ငြိမ် ● စစ်ကြီးပြီးသွားတော့
လင်းသက်ငြိမ် ● စစ်ကြီးပြီးသွားတော့ (မိုးမခ) ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၈ စစ်ကြီးတုန်းကတဲ့ ငါတို့ ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ စာအုပ်တွေ စစ်ကြီးတုန်းကတဲ့ ငါတို့ နားထောင်ခဲ့ရတဲ့ စကားတွေ စစ်ကြီးတုန်းက အလောင်းတွေ ငါတို့စိတ်ထဲ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကြီး ထိုးဝင်လာ စစ်ကြီးတုန်းက အကြောက်တရားတွေ ငါတို့စိတ်ထဲစိမ့်ဝင်လာ စစ်ကြီးတုန်းက ပျက်သွားတဲ့ အိမ်ကလေးတွေ စစ်ကြီးပြီးတော့ အသစ်ဖြစ်လာ စစ်ကြီးတုန်းက ပျက်သွားတဲ့ ဘဝတွေ စစ်ကြီးပြီးသွားတော့ အသစ်ဖြစ်သွားသလား စစ်ကြီးတုန်းက သွေးကွက်တွေ စစ်ကြီးတုန်းက သံချပ်ကာကားဘီးရာတွေ စစ်ကြီးတုန်းက ဖိနပ်ရာတွေ စစ်ကြီးတုန်းက စုတ်ပြဲသွားတဲ့ ထမီစတွေ စစ်ကြီးတုန်းက ပြတ်သွားတဲ့ ခြေလက်တွေ စစ်ကြီးတုန်းက မီးခိုးမည်းမည်းများ စစ်ကြီးတုန်းက သွေးဆုံးသွားတဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားများ စစ်အစာမှာ သစ္စာမလို စစ်အထာမှာ အချစ်ကဗျာမလို...
ကာတွန်း ကိုတေရဲ့ ထမ်းနိုင်တုန်းလေး ထမ်းခွင့်ရတာ
ကာတွန်း ကိုတေရဲ့ ထမ်းနိုင်တုန်းလေး ထမ်းခွင့်ရတာ (မိုးမခ) ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ကိုတေ Related posts ကာတွန်း ကိုတေရဲ့အတွေး (0) ကာတွန်း ကိုတေရဲ့ နေရာယူတတ်သူ (0) ကာတွန်း ကိုတေရဲ့ အမြင့်ရောက်လေ .. လေပိုတိုက်လေ … (0) ကာတွန်း ကိုတေရဲ့ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ (0) ကာတွန်း ကိုတေရဲ့ စင်ကာပူကို ကျော်ရမည် … (0)
ဖြိုးသီဟချို (Myanmar Now) ● အညာဒေသ ထန်းပင်အိုတို့၏ လားရာ
ဖြိုးသီဟချို (Myanmar Now) ● အညာဒေသ ထန်းပင်အိုတို့၏ လားရာ (မိုးမခ) ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၈ (ကျောက်ပန်းတောင်း) — မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ရှိ လွှစက်တစ်ခုသို့ ခုတ်ပြီးသား ထန်းပင်များ အလုံးအရင်းဖြင့် ရောက်ရှိလာသည်။ ထိုထန်းလုံးရှည်တို့သည် အချိန်ပိုင်းအတွင်းမှာပင် ပျဉ်ပြားများအဖြစ် အသွင်ပြောင်းသွားလေသည်။ မကြာသေးခင် ကျောက်ပန်းတောင်းတွင် တွေ့ခဲ့ရသော ဤသို့သောမြင်ကွင်းအပြင် ထန်းပင်တို့ ခုတ်လှဲခံရပြီး အတုံးအရုံး ပြန့်ကျဲနေသည့်မြင်ကွင်းမှာ အညာဒေသအတွက် မထူးဆန်းတော့ပေ။ အညာဒေသ ထန်းတောပြုန်းသွားမည်ကို စိုးရိမ်သူတို့က ထန်းပင် အရေအတွက်များပြားစွာ ခုတ်လှဲခံနေရခြင်းကို ဆန့်ကျင်နေကြသည်။ ဤအခြေအနေတွင် ထန်းပင်ကို တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ရန် ခုတ်လှဲနေကြသည်ဟု ယူဆနေသူ အများအပြား ရှိနေကြောင်း ကျောက်ဆည်မြို့မှ ဦးသိန်းလှိုင်က ပြောသည်။ “တရုတ်ပို့ဖို့မပြောနဲ့၊...
၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မင်းဇေယျရဲ့အသက် (၆၀)ပြည့် မွေးနေ့ ပြုလုပ်မယ် K (မိုးမခ) ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၈ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ (ဦး) မင်းဇေယျရဲ့အသက် ၆၀ ပြည့် မွေးနေ့အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့၊ ဒဂုံမြို့နယ်(တောင်)၊၂၄ ရပ်ကွက် ငုဝါလမ်း အမှတ်၂၃၀ ရှိ နေအိမ်မှာ ဇွန်လ ၁၆ရက် နံနက် ၇ နာရီကနေ ၁၂နာရီထိ ကျင်း ပပြုလုပ်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ယခုလို မွေးနေ့ပွဲပြုလုပ်ခြင်းဟာ ၎င်းရဲ့ပထမဆုံးပြုလုပ်တဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်လည်းဖြစ်ပြီး တဆက်တည်းမှာပဲ နေအိမ် မှာ ဘုရားအနေကဇာတင်ပွဲနှင့် ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပူဇော်ခြင်း အစီအစဉ်များလည်းပါရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ မွေးနေ့ပြုလုပ်ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်း သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ “ကျနော် အသက်အားဖြင့် ခြောက်ဆယ်ပြည့်ပါ ပြီ။ ဒါပေမယ့် ၂၂ နှစ်သက္ကရာဇ်ဖြိုခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော် တကယ့် လူ့ဘဝအသက်ဟာ...
တင်လတ်ကို – ကျွန်ုပ်တို့၏စာရွက်ဖြူဖြူ
တင်လတ်ကို – ကျွန်ုပ်တို့၏စာရွက်ဖြူဖြူ (မိုးမခ) ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၈ စာရွက်ဖြူဖြူပေါ်မှာ ငိုချင်းရှည်တွေ။ စာရွက်ဖြူဖြူပေါ်မှာ မဆုံးတဲ့ရယ်သံတွေ။ စာရွက်ဖြူဖြူပေါ်မှာ အမိန့်တွေ။ စာရွက်ဖြူဖြူပေါ်မှာ ကန့်ကွက်ရှုတ်ချမှုတွေ။ စာရွက်ဖြူဖြူပေါ်မှာ ပြင်းထန်တဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေ စာရွက်ဖြူဖြူပေါ်မှာ စစ်ပြေငြိမ်းမှုတွေ။ တကယ်တော့ စာရွက်ဖြူဖြူပေါ်မှာ ဘာမှမရေးတာကောင်းပါတယ် ။ ။ Tags: ချင်း, တင်လတ်ကို Related posts နိုလှိုင်း ● ကိုးဆယ်ခုနှစ်က လက်​ဖက်​ရည်​ဆိုင်များ (0) နိုင်ဝင်းသီ – လွင့်​​မျောတ​စ္ဆေ (0) နိုင်ငံတကာသာဂိ – Facebook ဖေ့စ်ဘွတ် ထူထောင်သူ၊ သုံးစွဲသူ၊ အမြတ်ထုတ်သူ နဲ့ အကျိူးစီးပွား (0) မြတ်စံ – ကျနော်နဲ့ မိုဟာမက်အာကြီး (0) မြတ်စံ...
ကာတွန်း OKKW ရဲ့ မိုက်တယ် … မိုက်တယ် … မိုက်ဆဲ …
ကာတွန်း OKKW ရဲ့ မိုက်တယ် … မိုက်တယ် … မိုက်ဆဲ … (မိုးမခ) ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း OKKW Related posts ကာတွန်း OKKW ရဲ့ ခေတ်နှစ်ခေတ် (0) ကာတွန်း OKKW ရဲ့ အဘတို့ ဆေးရုံ (0) ကာတွန်း OKKW ရဲ့ အဖျားရှူးနေတယ် … (0) ကာတွန်း OKKW ရဲ့ ပိုင်ရှင်မဲ့နေဆဲ …. (0) ကာတွန်း okkw ရဲ့ တာဝန် (0)
ဝါကျဖြူ – ပင်လယ်ပြင်ညစာ
ပင်လယ်ပြင်ညစာ ဝါကျဖြူ (မိုးမခ) ဇွန် ၁၃၊၂၀၁၈ နေဝင်​ချိန်​ကမ္ဘာကို ထမ်းလာခဲ့သတဲ့လား ။ ပင်​လယ်​နားက အိမ်​ဟာ လှိုင်းလုံး​တွေ ရှည်​ထွက်​လွန်းတယ်​ ။ လှိုင်း​တွေကို ဖြုတ်​ထုတ်​လိုက်​တဲ့ လက်​ထဲမှာ ငါး​သေ​တွေနဲ့ လူ​သေ​တွေက ပျံဝဲတက်​လာကြတဲ့ ယင်​​ကောင်​​တွေလိုမျိုး ငါခန္ဓာတခုလုံးကို ပိုင်းဖြတ်​​ဝေခြမ်းပြီး ကိုက်​ချီသွားကြ​ပေါ့ ။ 29/4/18 No tags for this post. Related posts No related posts.
ကိုသစ် (သီတဂူ) ● မုန်တိုင်းထဲက ဖယောင်းတိုင် – အပိုင်း (၁၂)
ကိုသစ် (သီတဂူ) ● မုန်တိုင်းထဲက ဖယောင်းတိုင် – အပိုင်း (၁၂) (မိုးမခ) ဇွန် ၁၃၊ ၂ဝ၁၈ ဒီနေ့မနက် ဝေလီဝေလင်းအချိန်မှာ နယူးဒေလီက ကိုထွန်းနောင်တယောက် ဓရံဆာလာကို ရောက်လာသည်။ ကိုထွန်း နောင်က ရန်ကုန် လှိုင်မြို့နယ်သားဖြစ်သည်။ အရေးအခင်းကာလမှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားရင်း ပစ်ကြခတ်ကြတော့ ပြေးရင်းလွှား ရင်းနဲ့ နောက်ဆုံး အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့ကိုရောက်ရှိလာပြီး အဲဒီမှာ သောင်တင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ သူငယ်ချင်းငနု ချောင်းသားကြီးရဲ့ အဆိုအရတော့ အဲဒီတုန်းက အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ မြန်မာရဟန်းတော်ရပ်ဝန်းမှာ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် တတ်တာဆိုလို့ သူနဲ့ ထွန်းနောင်နှစ်ယောက်ပဲ ရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ကိုထွန်းနောင်လာတော့ ကန်စွန်းရွက်တွေ၊ ချဉ်ပေါင်ရွက်တွေ တထုပ်ကြီးပါလာသည်။ နယူးဒေလီတက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်း တက်နေသည့် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ အရှင်ဇဋိလာ လင်္ကာရက...
ကာတွန်း လူကိုနော် – မခံနိုင်ကြတော့ဘူး တဲ့
ကာတွန်း လူကိုနော် – မခံနိုင်ကြတော့ဘူး တဲ့ (မိုးမခ) ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း လူကိုနော် Related posts ကာတွန်း လူကိုနော် – LCD က အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေ (0)
Page2of 903«12345...903»
50 years on - San Kunt
ဦးဝင်းဖေ - မောင်လင်းယုန် (ရှမ်းပြည်) ရဲ့ ကလောင်အမည်ခွဲတခု (မှားသလား မှန်သလား)
မောင်ရစ် - လူများ သက္ကရာဇ်များနဲ့ ဘ၀အတွက် ရွေးချယ်စရာ
အောင်ဝေး - ခြင်္သေ့နီ
>Saffron Revolution Remembered - One Year Later - Part 2
>Tu Maung Nyo - Unnecessary Regime's Parliament
၀တ်မှုန် (စင်ကာပူ) - ကျပ်ငွေဈေးနှုန်းအကြောင်း
>Cartoon Win Pe - accurate driver 2
အရှင်သြသဓ (ဟပ်မွန်းဗေး) - အခွင့်ရယ်သာ လာချင်ပါရဲ့လေး
ငြိမ်းချမ်းအေး ● စင်ကာပူလို မဖြစ်ချင်ပါနဲ့